Ny marikao ho toy ny planeta - Ny mpiasa sosialy | Martech Zone
Ny marikao ho toy ny planeta - ny mpiasa sosialy
Talata, Novambra 5, 2013 Alatsinainy, Novambra 4, 2013 Douglas Karr
Faly be izahay nahita EverySocial ary ny fahaizana mampiasa ny mpiasanao manokana hanampy amin'ny fampitomboana ny feon'ny orinasanao fa mbola gaga ihany izahay amin'ny fahanginan'ny orinasa maro. Fantatsika fa misy mpiasa sasany tsy mifandray tsotra izao, fa rehefa mahita retweet mpivady avy amin'ny orinasa misy mpiasa an-jatony izahay dia manomboka manontany tena hoe inona no mety tsy mety.
In Ny mpiasa sosialy: ny orinasa lehibe manao asa sosialy, Marketing Marketing Fokusana Manga mandeha ao ambadiky ny seho miaraka amina marika malaza maromaro — toa ny IBM, AT&T, Dell, Adobe, Southwest Airlines, Cisco, Acxiom, ary Domo — dia nisintona ny rakotra tantara momba ny fahombiazana tamin'ny fandraharahana ara-tsosialy nanosika ireo orinasa ireo tamin'ny taonjato faha-21. Ireo marika manapotipotika ireo dia samy tonga saina avokoa: ny làlana mankamin'ny asa sosialy dia mitoetra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mpiasa sosialy.
Mandehana jereo Ny mpiasa sosialy pejy fitobiana ary mahazoa toko santionany!
Tags: marketing manga mifantokampiasa sosialybokin'ny mpiasa sosialyny mpiasa ara-tsosialy
dotMailer EasyEditor: Hisintona ary alefa ny fanovana ny mailaka
Ny fitaovam-piadiana miafina ho an'ny marketing sy fivarotana tsara kokoa